Nwere ike ịzụta robot Pepper na Spain ma ọ na-efu ihe karịrị 20 puku euro | Akụkọ akụrụngwa
Pedro Rodas kwuru | | Robotics, Technology
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, onye òtù ọlụlụ anyị Juan Luis Arboledas ọ gwara anyị okwu na nke mbụ ya na ActualidadGadget banyere obere ihe ịtụnanya a. Ose robot nke nta nke nta na-enwe ọnụnọ karịa ebe ị nwere ike imefu ihe karịrị euro 20.000 iji zụta ya.
Dị ka Juan Luis kwuru, ọ bụ humanoid robot Emepụtara ya ka ọ bụrụ ka ị nwee ike iso ndị mmadụ na-emekọrịta ma na-edozi ụdị nsogbu na obi abụọ niile ụmụ mmadụ gbara gị gburugburu nwere.
Weebụ toytrónica.com Ihe ebube nke robotics dị ugbu a, ma mgbe ị hụrụ ihe ọ na-efu, ị gaghị enwezi ọchịchọ inwe otu akụkụ ya, ya na ohere nile nke ịnwale ya ma mee ka nyocha ya kwụsị. Anyị amaghị nke ọma ma ụlọ ahịa anụ ahụ nwere otu akụkụ iji hụ ya ka ọ na-arụ ọrụ, yabụ ọ bụrụ na ị bi nso ụlọ ahịa a ị nwere ike ịkwụsị ma gwa anyị ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ma ọ bụ ọ bụrụ na ha weta nkeji nke enyere iwu na arịrịọ .
Ọ bụrụ na anyị kwụsị ịgụ ihe niile nwere ike ime ya, akọwapụtara ihe ndị a na weebụsaịtị anyị na-ekwu maka ya:
Ose robot bụ programmable na Ọ nwere elu nke 120 centimeters. Ebumnuche ya iji soro ndị mmadụ na-emekọrịta ihe, nwere teknụzụ nke na-enye ya ohere iji nyochaa okwu okwu na-enweghị isi, ọnọdụ isi na ụda olu.
Ekele ya na ihe mmetụta ya, igwefoto 3D na igwe okwu anọ, Pepper nwere ike ịmata ọnọdụ mmetụta uche nke ndị mmadụ, mmegharị ahụ, ụda na mmetụ aka, na -emepụta ọnọdụ ọmịiko na njikọ nke na-akwado mmiri na mmekọrịta dị mma n'etiti robot-client.
Ose nwere ike imeghari mmeghari anya, nke o n’eji etinye aka n’oru ya niile dika asusu aru ma nwekwaa ike ịgafe ihe dika 3 km / h.
Ose robot -abịa na ihuenyo mmetụ 246 x 175 x 14'5 cm, na mkpebi nke 1280 × 800, nke dị na mpaghara obi. Ọ na-enye ọtụtụ ohere mgbe ị na - eme ihe omume ma hazie robot ma nwee ike ibunye ma nata ozi site na njikọ ya.
Ihe njirimara njirimara nke ose na-eme ka robot a dị mma na gburugburu ọrụ ndị ahịa. Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ ọ ga - arụ:
Dọrọ uche nke ndị ahịa
Ọ na-ewepụta ngwaahịa ma kọwaa njirimara ha.
Nye data ndị ahịa na ọnọdụ na ọrụ
Nyochaa Kupọns, kaadị, koodu QR, EAN ...
Jikọọ na ịkekọrịta data na CRM, ERP, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ebe nrụọrụ weebụ na ụlọ ọrụ ...
Igwe ihe eji eme ihe a bu ihe di nma maka ibido ihe ndi mmadu na-eme na robotic, yana ihe nyocha na mmepe maka ngwa ohuru.
Usoro mmemme nke ose na-akwado bụ:
Ose Gaa App: Ngwa a, naanị Robotrónica, na-eji Mbadamba Mbadamba na-enye ndị ahịa ozi ọhụụ, na-ejikọ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ jikọtara na profaịlụ ọrụ ọ bụla.
Arọ: 28 n'arọ
Ogo: 120 cm.
Omimi: 42,5 cm.
Batrị: Lithium, 30,0Ah / 795Wh
Nnwere Onwe: Ruo awa iri na abụọ.
Njikọta: Wi-Fi / Ethernet
Speed: Ihe karịrị 3km / h
Mbugharị akụkụ: Isi (1), ubu (2), ikiaka (2), nkwojiaka (2), mkpịsị aka (10), hips (1) na ikpere (1)
Uzo: 3 (nduzi niile)
Mbadamba: LG CNS
Ọnụahịa nke mmadụ a na-ahụ maka mmadụ bụ , 20.449,00 na ihe kacha dị ịtụnanya bụ na webụsaịtị ahụ na-ekwu na erere ha, yabụ anyị chere na n'oge ahụ ọ nwere nkeji na ọ reeworị. Lee, anyị na-egosi gị a ọhụrụ video nke ị ga-enwe ike ịhụ ya na-arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Robotics » Nwere ike ịzụta robot Pepper na Spain ma ọ na-efu ihe karịrị 20 puku euro
OvRcharge ebubo mkpanaka gị mgbe ọ na-akwụ ụgwọ